Waqtiga uu Adrien Rabiot dhameystirayo ku biiritaanka Juventus & warbaahinta Catalan oo shaki galiyay heshiiska de Ligt ee Bianconerri. – Gool FM
(Turin) 25 June 2019. Sida ay sheegayaan warbixino ka imaanaya gudaha Italy Sxiddiga reer France Adrien Rabiot ayaa laga yaabaa inuu dhameystiro ku biiritaankiisa Juventus maanta, balse waxey saxaafadda gobolka Catalonia shaki galiyeen in Matthijs de Ligt uu kusoo wajahan yahay Turin.
Sida uu website-kiisa ku qoran khabiirka reer talyaani ee arrimaha suuqa Gianluca Di Marzio, xiddiga sida xorta ah uga dhaqaaqaya Paris Saint Germain (Adrien Rabiot) ayaa noqon doona xiddig ka tirsan Bianconerri 1-da July, waana maalin kadib marka uu dhaco heshiiskiisa kooxda reer France.
Wuxuu noqon doonaa xiddigii labaad oo ay xagaagan xor ku helaan kadib Aaron Ramsey oo ay ku qanciyeen inuu kasoo hayaamo Emirates Stadium.
Dhinaca kale majaladda laga leeyahay gobolka Catalonia (Mundo Deportivo) ayaa boggeeda hore saakay kusoo qortay in Barcelona ay wali rajo ka leedahay saxiixa Matthijs de Ligt.
Warar hordhac ah oo dhawaan la helay ayaa sheegaya in Juventus ay wadahadal kula jirto wakiilka xiddigaan Mino Riola isla markaana ku qanciyeen inuu 70 Malyan oo yuuro xiddigaan ku keeno Allianz Stadium.
Dhinaca kale Sky Sport Italia ayaa qirtay in Bianconerri ay xiddigaan usoo bandhigtay 7.5 Malyan oo yuuro iney siin doonto sanadkii iyo gunno, balse waa lacag aad uga hooseysa inta uu doonayo oo ah 12 Malyan oo yuuro.
Si kastaba Bianconerri rabitaankeeda wuu muuqdaa, balse Mundo Deportivo ayaa qoreysa in Balaugrana aysan wali ka rajo dhigin xiddiga reer Holland.
Sidoo kale Sky Sport Italia waxey baahisay in Paris Saint Germain aysan wali quus ka istaagin damacooda xiddigaan.